पापी बाउले १४ बर्षकि छाेरीलाइ पनि छाडेन, छोरी गर्भवती भएकाे कुरा सुन्दा परिवारकै हाेस उड्यो! – PathivaraOnline
Home > अपराध > पापी बाउले १४ बर्षकि छाेरीलाइ पनि छाडेन, छोरी गर्भवती भएकाे कुरा सुन्दा परिवारकै हाेस उड्यो!
admin July 31, 2020 July 31, 2020 अपराध, समाज	0
याे पनि पढ्नुहाेसः उपत्यका प्रवेशमा रो,क
गृहमन्त्रालयले यात्रुलाई रातको समयमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रो,क लगाएको छ । उपत्यका भित्रिने धेरै यात्रुहरुमा कोभिड १९ पोजिटिभ देखिएको भन्दै साँझ ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म नाकामा यात्रुहरुको आवागमन पूर्ण रुपमा ब,न्द गराउने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने तीन वटा नाकाबाट परीक्षण गरिएकामध्ये २४ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गृहले प्रवेसमा कडाइ गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थानकोट, फर्पिङ र साँगाबाट संकलन गरिएको स्वाब परीक्षण गर्दा २४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए।